कफीमा भविष्य खोज्दै खोज्दै…
-विशाल श्रेष्ठ 'ओसिएन '
जीवन निश्चित गन्तव्य हैन । पोखरी अनि तलाउ हैन, अविरल बगिरहने नदी जस्तै ठान्छु जिन्दगीलाई । एकै ठाउँमा अडिग भएर लामो समय बस्न न मेरो मनले मान्छ न तनले । मेरो जन्मथलो मध्यनेपाल -५ , लमजुङ । कर्मथलो भने राजधानी ।
करिब २ वर्षअघि शिक्षण पेसा अँगालेर जीवन अगाडि बढाइरहेको म बाबा ममीको सपना अधिकृत क्याडेटको अन्तिम परीक्षाबाट बाहिरिएपछि शिक्षण पेसा त्यागेर जापान जाने सोचले राजधानी छिरेँ तर पढाइ हस्पिटालिटी क्षेत्रको भएपछि जापानी भाषासँगै मेरो काम वेटरबाट सुरु भएको थियो । केही महिना वेटर गरेपछि मनमा लाग्यो- कफी क्षेत्रमा केही गर्छु, जापान जादिनँ । फेरि बुवा ममीको प्रस्तावमा र मेरै मनले पनि सहायक प्रहरी निरीक्षकमा फर्म पनि भरेको थिएँ । मेरो पहिलो परीक्षाको दिन म सहायक प्रहरी निरीक्षकको परीक्षामा नगई हिमालय जाभा कफी स्कुलमा रहेको कफी ट्रेनिङमा पुगेँ । मेरो मनमा कफी क्षेत्रमा नै केही गर्ने उत्साह पलाएको थियो । उता घरमा भने सहायक प्रहरीको निरीक्षक परीक्षामा पहिलो चरणमा नै असफल भएँ भनेर झुट बोल्न पुगेँ ।
कफीमा स्फुर्ति ल्याउने क्याफिन हुन्छ, जसले मानसिक र शारीरिक थकान मेट्छ, अल्छीपन र निन्द्रा हटाउँछ । यसमा कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजिनस कम्पाउण्ड, क्लोरोजेनिक एसिड, भोलाटाइल कम्पाउण्ड र कार्वोक्सिलिक एसिड पाइन्छ ।
२०७६ भाद्र महिनाबाट सुरु भयो मेरो कफीको संसार । कफी क्षेत्रमा मेरो धेरै अनुभव नभए पनि मेरो लगनशीलता, मेरो मिहेनत र धैर्य गर्न सक्ने हिम्मतले नै स्पेसियालिटी कफी अफ नेपालले मेरो बारे केही लेखिदिँदा अझै जोश र जाँगर लिएर अगाडि बढ्दै मैले कफीसम्बन्धी अध्ययन गर्न थालेँ र केही लेख तयार गरेँ । यो लेख भने मेरो दोस्रो लेख हो । स्पेसियलिटी कफी अफ नेपालको माध्यमले नै नेपाल तथा विदेशमा रहनुहुने नेपाली कफी प्रेमी एवम् कफी क्षेत्रका उद्योगपति, ६ पटकसम्म यु.के. लात्ते आर्ट च्याम्पियन, वर्ल्ड लात्ते आर्ट फाइनलिस्ट धन तामाङ, यु.ए. इ लात्ते आर्ट च्याम्पियन वाइल्ड निपेन , अरेबिकाका धन घले, प्रजिन श्रेष्ठ, हिमाल तामाङ, केविन पुन, कफी क्लब चितवन, मान्स महर्जन, जस गुरुङ र सेफ सुमी गुरुङ, सेफ दिपेश रिजाल उहाँहरुकै साथ अनि माया ममताले कफी क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ ।
कफीकै कुरा गर्ने हो भने विश्वमा कफीलाई चिया पछाडिको दोस्रो प्रख्यात पेय पदार्थको रूपमा लिइन्छ । कफीमा स्फुर्ति ल्याउने क्याफिन हुन्छ, जसले मानसिक र शारीरिक थकान मेट्छ, अल्छीपन र निन्द्रा हटाउँछ । यसमा कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजिनस कम्पाउण्ड, क्लोरोजेनिक एसिड, भोलाटाइल कम्पाउण्ड र कार्वोक्सिलिक एसिड पाइन्छ । कफीको उचित र नियमित प्रयोगले मुटु, नसासम्बन्धी समस्या, डायबिटिज जस्ता रोगबाट बच्न मदत गर्छ । साथै बढी मादक पदार्थ सेवनबाट बिग्रेको कलेजोलाई स्वस्थ राख्न मदत गर्छ । विगतमा कफी विभिन्न रूप, मिश्रण र तरिकाले खाने चलन भए पनि आजभोलि स्वाद बढाउन खाद्य पदार्थ, चकलेट, हार्ड ड्रिङ्क्स, आइसक्रिम आदिमा कफी मिलाउने चलन आएको छ ।
बानी भएपछि साथीहरु भेट्ने भेन्यु पनि कफी सपलाई नै बनाउने गर्छन् । पहिले ‘चियापसलमा भेटौं’ भन्नेहरु अहिले ‘कफीसपमा भेटौं’ भन्न थालेका छन् ।
कफी आम नेपालीको लाइफस्टाइल बनोस् । आम सर्वसाधारणमा अझै पनि कुन प्रकारको कफी खाने र कसरी खाने भन्ने ज्ञान पुगिसकेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई यद्यपि नेपालमा कफी कल्चर नयाँ भने होइन । करिब ५० वर्ष भइसकेको छ, नेपालमा कफी खाइन थालेको । लोकल क्याफेमा दूध कफी खानेको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि कफीबिनकै कफी खानेको सङ्ख्या निकै कम छ नेपालमा । बिनकै कफी पिउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाहरु बुझ्नुपर्छ हामी नेपालीले तर हामी नेपालीलाई जति कफी खाए पनि मान्छेलाई बिहान उठ्नेबित्तिकै चिया नै चाहिन्छ । कफी कल्चर बढेको छ तर जन्मेको केही वर्षदेखि नै बनेको चियाप्रतिको लत कसरी छाडुन् ? जस्ट ब्रु इट “चिया जस्तै त हो कफी पनि । एकदमै एडिक्ट हुने पेय हो कफी, लत बसेपछि छुट्नै गाह्रो । अहिले ४० वर्षभन्दा पाका उमेरले पनि कफी रुचाउन थालेका छन, सुगर हुनेले पनि सुगरलेस कफी मन पराउँछन् । त्यसो त मान्छेहरु कफी खानका लागि मात्र कफी सप आउँदैनन् । कफी सप साथीहरु भेला हुने प्वाइन्ट भइसक्यो, बिजनेसका कुरा पनि कफीको चुस्की लिँदै गर्न मान्छे थालिसके । यसले मान्छेमा कफीको कल्चर बढाएको छ । बानी भएपछि साथीहरु भेट्ने भेन्यु पनि कफी सपलाई नै बनाउने गर्छन् । पहिले ‘चियापसलमा भेटौं’ भन्नेहरु अहिले ‘कफीसपमा भेटौं’ भन्न थालेका छन् ।
नेपाली कफी ‘स्पेसियलिटी नेपालमा उच्च गुणस्तरको कफी उत्पादन गर्ने शीतल र मन्द हावा चल्ने जलवायु छ । पानी नजम्ने भिरालो परेको हराभरा पहाडी भूभाग प्रशस्त छ । सिँचाइ र प्रशोधनको निम्ति आवश्यक पर्ने पानीको स्रोत पनि छ । तसर्थ नेपालमा कफी खेतीको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमा पाइने कफी एक हजारदेखि एक हजार छ सय मिटरसम्मको उचाइमा उत्पादित अरेबिका वर्णको टिपिका र बर्बन जातका हुन् । प्रायः सबै ठाउँमा हातैले टिपेका कफीहरू हाते वा लघु पल्पिङ मेसिनमा प्रशोधन गरिन्छ । अन्य कफी उत्पादक मुलुकको भन्दा भिन्न प्रकारको हावापानी भएकाले नेपाली कफीमा विशिष्ट प्रकारको गुण र वास्ना रहेको कफी पारखीहरू बताउँछन् । साथै नेपालमा प्रायः सबै कफी प्राङ्गारिक प्रविधिबाट उत्पादन भएकाले नेपाली कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘स्पेसियलिटी’ कफीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा कफी क्षेत्रका समस्या मूलतः उत्पादनसँग सम्बन्धित छन् । मध्यम उचाइका पहाडमा कफी खेतीमा लाग्न र रहिरहन उत्प्रेरणाका ठोस कार्यक्रम भएका छैनन् । कफी प्रशोधनमा एकरूपता छैन । कफी व्यापारीहरूमा आचारसंहिताको अभाव छ । सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रहरू बलिया र सक्रिय हुन सकेका छैनन् । कफी खेती र यससँग सम्बन्धित व्यवसाय नेपालको सन्दर्भमा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको हुँदा उल्लिखित समस्याका समाधान खोज्नु जरुरी छ । सोको लागि नीतिगत सम्बोधन र समाधानका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । नेपालको परिवेश र सन्दर्भमा आधारित अनुसन्धान गर्दै किसान लगायत अन्य व्यवसायीहरूलाई आकर्षण र उत्प्रेरणाका लागि अभियानकै रूपमा कफी रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । छहारी व्यवस्थापनसम्बन्धी उपयुक्त सम्बोधन साथै सम्बद्ध सबै पक्षको लागि आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
शुक्रबार, भदौ १९, २०७७, २०:३६:००